PUBG Mobile ၏ beta အသစ်ကိုသတင်းများဖြင့်သင်ကစားနိုင်ပါပြီ Androidsis
PUBG Mobile သည်ကစားသမားများကို၎င်း၏ရင်ခွင်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းပေးသည် ယခုအခါ beta ကိုရိုင်ဖယ်အသစ်၊ မော်တော်ယာဉ်အသစ်၊ နေရာဒေသများရှိရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကိုပါ ၀ င်သောဗားရှင်း 0.11.5 ဖြင့်ထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
zombie mode အသစ်ကိုဖွင့်ပြီးမကြာခင်မှာဘဲ၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်ကစားသမားတိုက်ခိုက်နေစောင့်ရှောက်လော့Resident Evil မှတိုက်ရိုက်လာသည့်လမ်းလျှောက်သူအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ဒီဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကို beta နဲ့ဘာတွေဆောင်ယူသလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
2 PUBG Mobile မိုဘိုင်း beta အသစ်၏သတင်းများ
3 ဘယ်လို beta ကို 0.11.5 ကို install လုပ်ပါ
PUBG မိုဘိုင်းသည်အတော်လေးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ထို့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အချို့သောနေရာများတွင်လောင်းကစားခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည့်ယင်းသို့သောချိတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုကစားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့စုံတွဲတစ်တွဲအနေနှင့်သို့မဟုတ်ကစားသမားတစ်ယောက်နှင့်အတူတစ် ဦး တည်းရှင်သန်ရပ်တည်ရန်လိုအပ်သည့် Battle Royale ဂိမ်းများကိုမပျော်ဝင်စေရန်အတားအဆီးမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
gameplay ပြီးသားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်လျှင် Tencent Games သည်အနည်းငယ်မျှသော update များကိုဖြန့်ချိသည် တစ်လကျော်ကျော်ကြာပြီဖြစ်သောသန်းပေါင်းများစွာသောကစားသမားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ်ကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်အောင်အကြောင်းအရာများထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်ဟုဆိုလိုသည်။
အပြင်သစ်ကိုမှ PUBG Mobile Resident Evil ဖုတ်ကောင်စနစ်ငါတို့အရင်ကရှိခဲ့ဖူးတယ် PUBG ရာသီ5အစအသစ် Vikendi အမည်ရှိနှင်းကျမြေပုံ ပင်စနိုးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော အမာခံများကဲ့သို့အသစ်သော Modes သာ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကမှ။ တိုတိုပြောရရင်၊ မွမ်းမံစောင့်ရှောက်သောကြီးစွာသောဂိမ်း ဒီဗားရှင်းအသစ် 0.11.5 နှင့်ဝသကဲ့သို့။
PUBG Mobile မိုဘိုင်း beta အသစ်၏သတင်းများ
ဒီ beta ရဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းကအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ် ယခုမြင်နိုင်သောပြောင်းလဲနေသောရာသီဥတုစနစ် Miramar နှင့် Erangel မြေပုံပေါ်တွင်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲညဥ့်နက်တဲ့နေရောင်ခြည်နဲ့နေရောင်ခြည်မပေးခဲ့ပေမယ့်ဒုတိယမြောက်အချိန်ဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်သင် Erangel ကိုသာကစားလျှင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအသစ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ငါတို့လည်းရှိသည် အသစ် G36C ရိုင်ဖယ် Vikendi ဆီးနှင်းမြေပုံအတွက် Sanhok တောတွင်းမြေပုံအတွက် Tukshai အမည်ရှိယာဉ်အသစ်နှင့် Resident Evil ၏ဖုတ်ကောင်စနစ်သို့အသေးစားပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သည်။ PUBG မိုဘိုင်း beta မှတ်စုများမှာ -
ထည့်သည် Erangel ရှိပြောင်းလဲနိုင်သောရာသီဥတုစနစ် နှင့် Mirama ။
လက်နက်အသစ်ကိုထည့်သွင်းထားသည် - G36C ရိုင်ဖယ် (Vikendi အတွက်) ။ ၎င်းသည် ၅.၅၆ မီလီမီတာခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်နိုင်သည်။ Vikendi တွင် SCAR-L ကိုအစားထိုးလိုက်သည်။
က Sanhok အသစ်အထူးသီးသန့်မော်တော်ယာဉ်: Tukshai၊ သုံးဘီးကားတစ်စီး။ ၎င်းသည် Jeep၊ Dacia နှင့် Mini Bus တို့ကိုအစားထိုးရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဂိမ်းကာလအတွင်းအခါအားလျော်စွာဖုတ်ကောင်များသည်အားနည်းနေသောအခြေအနေသို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
သူတို့မှာရှိတယ် မြေပုံပေါ်တွင်အချို့ဒေသများ fixed ဘယ်မှာဖုတ်ကောင်ဝင်လို့မရဘူး။
El loot ကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ.
El အမြန်ချက်တင်စာ "ကျွန်ုပ်တွင်ရိက္ခာများရှိသည်" ယခု Pre- ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကြည့်ရှုနေသည့်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားသောအပိုင်းအချို့မှဝှက်ထားသောအခါ ၀ တ်စုံအစမ်းကြည့်ခြင်းသည်သတိပေးချက်တစ်ခုပေးပို့လိမ့်မည်။
အသစ်သောသေတ္တာမှအဝတ်ကိုကြည့်သောအခါအဟောင်း box မှ preview ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
Feedback ကိုပင်မ menu ခလုတ်များထဲသို့ထည့်သည်။
ဘယ်လို beta ကို 0.11.5 ကို install လုပ်ပါ
မသန်စွမ်း beta ကို 0.11.5 install လုပ်ပါ: PUBG Mobile beta ကို download လုပ်ပါ.
beta အကြောင်း ၎င်းကို PUBG Mobile ၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းမှ လွဲ၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုသတိရပါ ပြီးတော့ guests ည့်သည်တွေလိုပဲကစားနိုင်တယ် လူမှုရေး logins အလုပ်မလုပ်ပါ
una PUBG မိုဘိုင်းအတွက်ယခု beta အသစ်ကိုရနိုင်သည် အဓိကမြေပုံအတွက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ရိုင်ဖယ်နှင့်တောသစ်မြေပုံအတွက်မော်တော်ယာဉ်အသစ်များစသည့်အရေးကြီးသောသတင်းများရရှိစေသည်။ ကြိုးစားပြီးပြီ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG မိုဘိုင်း » PUBG Mobile beta ကိုရိုင်ဖယ်အသစ်၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားများစွာဖြင့်ဗားရှင်း ၀.၁၁.၅ တွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ
Yeah Bunny2သည်ချစ်စရာကောင်းသောအဆုံးမဲ့အပြေးသမား platformer ဖြစ်ပြီး pixel များနှင့်အရောင်များစွာတို့ပါဝင်သည်